Wholesale banga grinder Mugadziri uye Mutengesi | Kusanganisa
Isu tinoshandisa servo mota uye yakatetepa gwara njanji kuve nechokwadi cheiyo mushini.
Mishini yedu inokodzera yakakwira chaiyo nyanzvi yezvirimwa, vagadziri vemagetsi, mafekitori ehurdware, vagadziri vemashizha, mafekitori ekudhinda, nezvimwe.
Musoro wekukuya uri kushandisa chishandiso chinokurumidza chekusimudza giya, izvo zvinoita kuti kutsiviwa kwegumbo rive nyore uye nekukurumidza, inovandudza mashandiro, uye inoderedza mutengo wevashandi. Iyo yakakora bhora screws mukati mekushanda pamwe neakagadziridzwa mhangura-akagadzirwa nzungu kugadzirisa axial clearance yevashandi tsvimbo. Musoro wekugaya unotora iyo yekugaya mota inosangana neyakajairwa nyika.Iyo zvine musoro yakagadzirirwa kugadzirisa kukuya kwakaringana uye kuwedzera hupenyu hwebasa.
Iyo yemagetsi chuck yakanakisa muhunhu, yakasimba uye inosangana neyakajairwa nyika, iyo inovimbisa kushoma kupisa, simba guru rekuyamwa uye hupenyu hwakareba hwebasa.
1.Muchina uyu unonyanya kukuya mhando dzese dzemapanga marefu, senge peeling muchina banga, Granulator banga, kucheka bepa banga, Kucheka mashizha, kucheka mapanga nezvimwe.
2. Muchina uyu unogona kushanda banga repamusoro rebanga. Max. Kushanda kureba i1500mm.
3. Mutumbi wemuchina uyu dhizaini yemuviri wegantry, ine yepamusoro simbi weld, Muviri une simba rakakura uye kuomarara kwakanaka.
4. Iyo inoshanda inoshandiswa electro magnetic chuck. Uye zviri nyore kwazvo kukochekera banga. Iyo inoshanda iri nyore kugadzirisa iyo kona nehonye giya.
5. Muchina uyu unoshandisa inverter. Zvinogona kuve nyore kugadzirisa yakatwasuka uye yakatwasuka kumhanya kwemusoro wekugaya.
6. Jobho kurongeka kwemuchina i0.01mm
Pashure: kumucheto kucheka saha
Zvadaro: danda debarker